Klopp oo hogaaminaya Tababarayaasha u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha October ee horyaalka Premier League – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Abdihakim Sharif Ali / November 1, 2019 November 1, 2019
England(SONNA)-Waxaa la shaaciyey Tababarayaasha u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha October ugu fiicnaa horyaalka Premier League, waxaana ku tartamaya shan tababare oo shaqo fiican ka qabtay horyaalka bishii la soo dhaafay.
Jurgen Klopp, Frank Lampard, Graham Potter, Brendan Rodgers iyo Dean Smith ayaa ku jira liiska musharixiinta abaal-marinta macallinka bisha October ee horyaalka Premier League.
Kooxda Klopp ee Liverpool ayaan laga badinin waxayna lix dhibcood oo nadiif ah ku hayaan hoggaanka horyaalka Premier League, kaddib guushii ay ka gaareen kooxaha Leicester City iyo Tottenham Hotspur, kahor inta aysan barbaro la galin kooxda Manchester United.
Frank Lampard ayaa ku hogaamiyay kooxdiisa Chelsea inay saddex kulan guul gaarto bishii lasoo dhaafay ee October, waxayna labadii kulan ay banaanka kula soo ciyaareen kooxaha Southampton iyo Burnley ay ka soo dhaliyeen min afar gool.
Macallinka Brighton & Hove Albion ee Graham Potter ayaa wuxuu ku hogaamiyay kooxdiisa bishii lasoo dhaafay laba guul, iyagoo 3-0 kaga adkaaday kooxda Tottenham Hotspur, halka ay sidoo kale 3-2 ku garaaceen Everton oo marti u aheyd.
Tababaraha Leicester City ee Brendan Rodgers ayaa kooxdiisa ku hogaamiyay inay ka soo kabsato guuldarro xilli dambe ku soo gaartay Anfield, waxayna garaaceen Burnley, kaddib waxaa loo diiwaan galiyay guushii ugu weyneed taariikhda horyaalka Premier League oo ay 9-0 kaga gaareen Southampton.
Macalinka kooxda Aston Villa ee Dean Smith ayaa bishii hore 3 kulan ay ciyaareen waxay kooxdiisa heshay 2 guul iyo 1 guuldaro, iyagoo 5-1 ku dhufteen naadiga Norwich City, halka guul xilli dambe ah ay gurigooda kaga gaareen Brighton & Hove Albion, kahor inta aysan guuldarro kala kulmin Manchester City.